Nokia 1.3 သည်တရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Android 10 Go Edition ပါ ၀ င်သည့်နိမ့်ကျသည့်ဖုန်းတစ်မျိုးဖြစ်သည် Androidsis
Nokia 1.3 တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Android 10 Go Edition ပါဝင်သည့်နိမ့်ကျသည့်ဖုန်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်
HMD Global သည်ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များသို့ရည်ရွယ်သည့်နောက်ထပ်ဖုန်းများအနက်မှတစ်လုံးကိုတင်လိုက်သည်။ The Nokia က 1.3၎င်းကိုခေါ်သည့်အနေဖြင့်၎င်းသည်အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးစျေးနှုန်းမှာယူရို ၁၀၀ ထက်မကျော်လွန်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။
ဖင်လန်ကဒီ terminal ကိုကြေငြာလိုက်သည် မိုဘိုင်းကမ္ဘာ့ကွန်ဂရက်၏ရပ်ဆိုင်းမှုပြီးနောက် Coronavirus ကြောင့်ဘာစီလိုနာကထုတ်လုပ်သူကဒီပွဲကိုမတက်ရဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆိပ်ကမ်း ၄ ခု၊ Nokia က 8.3 5G, Nokia က 5.3 နှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက် XpressMusic ကို Nokia 5310 နှင့်အတူ.
1 Nokia 1.3 အင်္ဂါရပ်များ
Nokia 1.3 အင်္ဂါရပ်များ
El အသစ်က Nokia 1.3 built-in မျက်နှာပြင်ကြီးအတွက်ထင်ရှားသည်မျက်နှာပြင်သည် ၅.၇၁ လက်မ LCD panel ဖြစ်ပြီး HD + resolution 5,71 x 1.520 pixels နှင့် 720: 19 အချိုးအစားရှိသည်။ ဒီစက်မှာ ၃၀၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုထည့်သွင်းထားပြီးအနည်းဆုံး ၄၈ နာရီကြာလည်ပတ်မှာပါ။ အနည်းဆုံးတော့ထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင်ကအာမခံပေးမှာပါ။ ၎င်းသည် MicroUSB9port မှတဆင့်အားသွင်းသည်။
Nokia သည် Qualcomm ပရိုဆက်ဆာကိုတပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်သည်တစ် ဦး ကွန်ကရစ်လမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ် Snapdragon 2151,3 GHz 64-bit quad-core CPU နှင့် GPU သည် Adreno 308. ၎င်းတွင် 1 GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု 16 GB ရှိပြီး MicroSD ကဒ်ပြားဖြင့်အများဆုံး 256 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။
El Nokia က 1.3 အာရုံခံကိရိယာတွေပါ ၀ င်ပြီးအဓိကနောက်ကင်မရာကတော့ 8-megapixel module ဖြစ်ပြီး LED Flash နဲ့ရှေ့ selfie ကင်မရာက 5-megapixel ပါ။ ဆက်သွယ်မှုအပိုင်းတွင်ပစ္စည်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်မည်။ ၄G ဖုန်းဖြစ်သည်။ Bluetooth 4, WiFi 4.2, GPS နှင့် ၃.၅ မီလီမီတာနားကြပ်ပေါက်တပ်ဆင်ထားသည်။
Android 10 Go Edition တွင်ပါ ၀ င်သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် HMD Global ကမူ Android 11 Go Edition ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း update လုပ်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးထားသည်။ ၎င်းသည်အလေးချိန် ၁၅၀ ဂရမ်အောက်သာရှိသည်။ ၎င်းသည်ရောက်ရှိလာသည်နှင့်အမျှယူနစ်အနည်းငယ်ရောင်းရန်မျှော်လင့်သောဖုန်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
El Nokia 1.3 ကိုAprilပြီလတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်သူတို့သည်မည်သည့်တိုင်းပြည်ကိုကန ဦး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမပေးရသေးပါ။ သို့သော်၎င်းသည်တိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟုအာမခံသော်လည်းစျေးနှုန်းမှာ ၉၅ ယူရိုဖြစ်သည်။ မီးသွေးနှင့်သဲအရောင်များရောက်ရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Nokia 1.3 တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Android 10 Go Edition ပါဝင်သည့်နိမ့်ကျသည့်ဖုန်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်
Android 11 DP2 ကိုယခုရပြီ
Snapdragon 8.3 ပါသောဖင်လန်နိုင်ငံ၏စမတ်ဖုန်းသစ် Nokia5765G